UKUTHENGA KANYE NOKWENZIWA KWESIMANGALISO - Abenzi besigidi
UKUTHENGA KANYE NOKWENZA UKUDLULA
Iqinisekisa izinqumo ezinolwazi
Iqinisekisa ukuqhubeka kwebhizinisi
Iqinisekisa impilo ende
Gwema izimpi zomthetho
Gwema ukulahleka kwemali
Ukufinyelela okusheshayo eminyakeni yesipiliyoni
Amaqembu ethu okuhambisana nokuhambisana nenkuthalo Emhlabeni jikelele unobuchwepheshe obukhulu ekucwaningweni kwemali, intela, ezomnotho kanye nomqondo wokulinganisa, ukukhuthala okufanele. Kubaluleke kakhulu, sinesipiliyoni esisebenzayo kanye nokusindiswa kwebhizinisi elidingekayo ukukhomba izindaba kumazinga athile enkampani kanye namazinga athile omkhakha futhi sihlole izinto ezisebenzayo emhlabeni jikelele eziqhuba amanani webhizinisi.
Sisebenza ngokubambisana namakhasimende nabeluleki ukuthuthukisa inhloso, ukuhambisana nokuzimela nokukhuthala okufanele okwenzelwe ukufeza izidingo zeklayenti. Sinikezela ngemibiko eyenzelwe ukubekezelela ukucutshungulwa kweziphathimandla zentela, abacwaningi mabhuku, izinkantolo, abalamuli nabanye abathintekayo.
Emhlabeni jikelele, kanye nendawo eqinisayo yokulawula kanye nezingqinamba ezisemthethweni kanye nemigomo, amabhizinisi abandakanyeka emisebenzini yokwakhiwa kabusha, ama-Merger kanye nokutholwa, ukuqala, amaphrojekthi amakhulu, izabelo ezijikelezayo, ukuthekelisa nokuthumela impahla ezweni lonke kubhekene nezinselelo ezahlukene nokuvinjwa kokuvinjwa kwemigwaqo esiphambanweni. Ukuhamba -Border kwabasebenzi, ukusungulwa kwebhizinisi, ukunwetshwa ngisho nokusimama kanye nokusinda. Abasebenzisi abayizigidi bahlinzeka ngokuqondisa nokusekelwa ezinkampanini zabo bonke ubukhulu ekuthobeleni kanye nasekushisekeni okufanele.
Okokuhlanganiswa nokutholwa kanye nokuhlelwa kabusha kwenhlangano
Ukuhlaziywa ngesikhathi sokuhlanganiswa kanye nokutholwa, ukuhamba phansi kanye nezinye izinhlobo zemisebenzi yokwakhiwa kabusha kugxilwe kakhulu “esithombeni esikhulu” nasekunciphiseni ubungozi bezezimali — okuvame ukunganaki indawo ebucayi yokuhambisana nokufudukela kwamanye amazwe. Izinguquko ezinkampani ngaphandle kokucatshangelwa okwanele kwemithelela yokufuduka zingaholela ekuphindaphindeni okukhulu kubasebenzi ababalulekile kanye nokuphumelela kokuhlanganiswa. IMillion Makers ibilokhu isiza amabhizinisi ukuzulazula ngezinto eziphathelene nokufuduka kwezinye izinto eziphathelene nemisebenzi yezezinkampani amashumishumi eminyaka. Uphenyo lwethu ngokufanele lubandakanya ukucubungula kahle isimo sokufika kwabantu, ukumisela umthelela kanye nokuphathwa kwemisebenzi edingekayo yokufuduka.
Izinkampani emhlabeni jikelele zivame ukudinga ukuhamba ngasikhathi sinye kwamakhulu ezinkulungwane zabasebenzi, ziveze izinselelo ezahlukahlukene ngokuya ngesibalo sabasebenzi, izindima zabo kanye neziqinisekiso, kanye namazwe ahilelekile. Singasebenzisana kakhulu nawe ekufezekisweni kwamaphrojekthi ukunikeza umhlahlandlela wokugcina ukuhambisana nemigomo yezinqubo zokufika kwabantu basekhaya. Ngokubambisana nawe, singakha izinhlelo zokwenza ngokwezifiso ngokuhambisana nezinto eziza kuqala nokuhlosiwe, sikusiza ukuthi uhlale ulandelela futhi ufeze izinhloso zakho zephrojekthi.